Sida loo sameeyo qof dumar ah oo jacayl ku qabta ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sida loo sameeyo qof dumar ah oo jacayl ku qaba. Waxaa la sheegaa in xaaladda jacaylku ay tahay mid ka mid ah waqtiyada ugu farxadda badan nolosheenna. Jaceylka naag waa wax dhib badan, si taas loo gaaro waa inaad soo saartaa dhammaan hubkaaga. Laakiin sidoo kale waa lagu diidi karaa iyada, iyo si looga hortago in tani dhacdo, waxaan ku abuurnay maqaalkan qaar ka mid ah talooyin aasaasi ah oo loogu talagalay haweeneyda riyadaada si ay u aragto nafteeda adiga kugu jira. Nasiib wanaagsan!
1 Sida loo sameeyo qof dumar ah oo ku jeclaaday tallaabo tallaabo
1.1 1. Dhageyso
1.2 2. Noqo qof dabacsan
1.3 3. si fiican u labbiso si ay gabadhu kuu jeclaato
1.4 4. Ha ku faanin
1.5 5. Ha illoobin
1.6 6. Wac iyada ka bacdi taariikhda ugu horreysa si aad uga dhigto jacaylkaaga
1.7 7. Si tartiib ah u soco
1.8 8. U roonow asxaabtaada
1.9 9. Haga xiriirkaaga
1.10 10. Noqo Romantic si ay naagtu kuu jeclaato
1.11 11. Qoyskaaga la baro
Sida loo sameeyo qof dumar ah oo ku jeclaaday tallaabo tallaabo
Ma jiro qof dumar ah oo la mid ah mid kale, waana sababta ay rag badan ka baqayaan marka ay waydiisanayaan taariikhda. Ma garanayaan sida loo dhaqmo, in haweeneydan laga yaabo inay jeceshahay oo ay u maleynayaan inaysan awoodin inay gaaraan.
Marka xigta waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah talooyin aasaasi ah oo kaa caawin doona inaad gaarto yoolkaaga naag ha ku jeclaado.
Dumarka oo dhan waxay jecel yihiin inay hadlaan oo la maqlo. Maalinta ugu horeysa waxaad ka hadli kartaa mowduucyo aan la tirin karin, haddii aad rabto inaad dareento inay gaar tahay, u fiirso wax kasta oo ay kuu sheegto oo la hadal. Tani waa bilow wanaagsan waxayna kugu xiraysaa maskax kicin.
2. Noqo qof dabacsan
Marka aan ka hadalno in aad noqoto mudane, macnaheedu maaha in aad noqoto amiir soo jiidasho leh. Si aad u noqoto mudane kaliya ayaa lagugu leeyahayu dhaqan si edeb leh, debecsan, oo tixgalin leh. Tusaale ahaan, ka fur albaabka makhaayadda ama baabuurka si uu u dhaafo oo ha isticmaalin ereyo iyo odhaahyo cay ah inta lagu jiro taariikhda. Sidoo kale, xitaa ha ka fikirin samaynta horumarinta galmada sababtoo ah waxay noqon lahaayeen meel ka baxsan oo ay abuuraan jawi kacsan. Waad is baranaysaan, ma tihid lamaane.
3. si fiican u labbiso si ay gabadhu kuu jeclaato
Ma jirto qof dumar ah oo u malaynaysa in ninka nolosheeda ku jira uu yahay nooca xidha dharka wasakhaysan oo leh ur xun. Nimanku waa la xiiray ama gadhka si fiican loo qurxiyey, oo cadar leh, oo timo nadiif ah leh iyo dharka ka muuqda miyir-qabkooda ayaa ah tafaasiil dhinacyo badan kasbanaya gabadha aad jeceshahay.
4. Ha ku faanin
Waxaa jira rag jecel inay soo bandhigaan shaqooyinkooda ama hantidooda, laakiin tani Ma aha wax ay tahay inaad ku hor sameyso naagta aad damacsan tahay inaad qabsato. Sidoo kale ma rabto in aad ka hadasho waxyaabo aadan haysan, mar hadday dhacdona ma aad cajabin kartid.
5. Ha illoobin
Haddii aad heshay naag qumman oo aad rabto in ay ku jeclaato, waa inaad ku darto wada hadalka asxaabtaada. Isku day in aad ka hadasho mowduucyada iyadana xiiseeya, una ogolow in ay ka hadasho ra'yigeeda. Ka hadalka baabuurta, kubbadda cagta, iyo dumarka kale waa hubaal su'aal kama baxayso. Hubi in saaxiibadaa ay sidoo kale yaqaaniin sida xasiloonidooda loo ilaaliyo oo ay leeyihiin mowduucyo kala duwan oo ay kaga hadlaan.
6. Wac iyada ka bacdi taariikhda ugu horreysa si aad uga dhigto jacaylkaaga
Haddii aad soo wacdo maalinta xigta taariikhdaada ugu horreysa, Fursadaha uu ku jeclaan karo inuu ku jeclaado aad bay u korodhay. Ha ciyaarin wax ka jeedinta, waa wax aan faa'iido lahayn. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa wac iyada si aad u aragto sida ay tahay, u sheeg in aad jeceshay la kulanka iyada oo aad rabto in aad mar kale aragto. Haddii uu runtii rabo inuu si fiican kuu barto, wuu aqbali doonaa martiqaadka. Ha ka badin ilaa taariikhda labaad ay timaaddo kun farriimo telefoon, shabakadaha bulshada ama iimaylka.
7. Si tartiib ah u soco
Ragga intooda badan waxay rajeynayaan in taariikhda ugu horeysa ka dib, wax ka sii dhow ayaa dhici doona. Laakiin xiriirka dhow wuxuu u baahan yahay waqti, ixtiraam, mas'uuliyad, iyo ballanqaad. Wax kasta ka ixtiraam iyada. Ninka taas ku xisaabtama, wuu ixtiraamaa go'aanka iyo wakhtiga uu qofka kale soo jeedinayo.
8. U roonow asxaabtaada
Ogaanshaha saaxiibadaada waxay ku dhowdahay caado, waana meesha aad ka heli doonto ogolaansho ama diidmo iyaga. Middaani aad bay muhiim ugu tahay iyada, markaa u dhaqan oo saaxiib. La hadal iyaga adoon ka baqin inaad tahay qofka aad tahay. Ugu dambayntii, in aad ahaato mid hufan intii suurtogal ah ayaa kuu fiican.
9. Haga xiriirkaaga
Markaad go'aansato inaad naag la joogto, waa inaad si cad u sheegtaa waxa aad ka filayso xidhiidhka. Haddii aadan mustaqbal la arkin, jooji ballantaada, laakiin ha la joogin iyada xanuun ama raaxaysi darteed. Haddii, dhanka kale, aad rabto in aad weligaa leedahay, guurso. Way fududahay. Dumarku waxay jecel yihiin inay ogaadaan halka ay u tallaabayaan.
10. Noqo Romantic si ay naagtu kuu jeclaato
Jaceyl-ka-jeceyl-ka-jeceyl-qabashadu maaha mid dhaban-ma-doon ah. Romanticism waa isku dhafka ficilada chivalrous, sida bixinta biilka makhaayadda, oo leh waxyaabo yar oo la yaab leh oo u dhaxayn kara in la siiyo ubax sabab la'aan si loogu baro dadka kale sida saaxiibkaa (haddii ay dhab ahaantii tahay).
11. Qoyskaaga la baro
Soo bandhigida naagta aad jeceshahay qoyskaaga waxay la mid tahay xidhid ballan ballan. Markaa haddii aad hubto inay iyadu tahay naagtii noloshaada, u bax. Looma baahna in la diyaariyo qado rasmi ah ama casho si qof kastaa isu barto. Kaliya xidho sida lammaanahaaga kulan qoys ama xaflad. Way nafisantahay mana dareemi doontid kalsooni la'aan la kulanka qof walba. Laakin xasuusnoow in aadan ka tagin kaligeed wakhti kasta.
Haddi aad rabto in aad guulaysato oo aad naag ka dhigto jacaylkaaga, samee hab aad u noqoto mid koobaysa dhammaan sifooyinkan shakhsiyaddaada. Waxaan kuu xaqiijineynaa in haweeneyda riyooyinkaagu aysan awoodi doonin inay iska caabiso inaad shukaansi kula yeelato, waxaana rajeyneynaa, inaad dhammaan garab istaagto.
Haddii aad rabto inaad sii waddo kordhinta aqoontaada, booqo maqaallada intiisa kale Disco.online